musha » bhuku » Paleo Sweets Paleo Dessert MAHARA Recipe Book
Unoitei kana iwe usingazivi nzira yekuita dessert inotevera chirongwa chePaleo chirongwa? Iwe unofanirwa kuva neunyanzvi hwekubika pakugadzirira kudya kunonaka pasina kushandisa zvinoshandiswa izvo zvisingabvumirwi kana unoda Paleo dessert mapepa kuti uomate. Pasina imwe yeiyi, kutevera kudya paleo kunenge kwakaoma zvikuru.
Kana wakanga uchitsvaga mapeji mapeji ePaleo matsva, tine nhau huru kwauri. Shamwari yedu Kelsey Ale ari kumupa Paleo Sweets mapeji recipes bhuku reMHURI kuvanhu vekutanga 500. Iyo Paleo Sweetsbiki cookbook ine noutano hwakanaka Paleo yakagadzirwa dessert recipes iyo inonaka inoshamisa. Iwe unogona kutora kabhuku rakazara gwaro rakazara ruvara iwe pachako zvachose FREE! Iwe unotofanira kubhadhara kutumira.
Kelsey Ale ari kupa bhuku iri rePaleo MAHURI kwechinguva chiduku chete kuti abatsire kuparadzira shoko pamusoro pePaleo chirongwa chake chitsva chokudya. Iri bhuku ibhuku rekusununguka (kwete bhuku rejedi) iwe unotofanira kubhadhara mari shoma yekutumira nekubata. Click Here kuti uwane bhuku rako! Ndapota cherechedzai: Iri bhuku rePaleo risingabhadharwi rinobvumirwa apo zvipo zvinoguma.